En vente actuellement 16/11/2018
Manadino olona mbola tiana, inona no atao ?
Isan’ny sarotra indrindra ao anatin’ny fiainam-pitiavana ny manadino ny olona notiavina, satria voatery misaraka.
Mikorontana fadimbolana, mihintsam-bolo…ity no antony!
Ny vehivavy no miaina rarin-tsaina kokoa raha mitaha amin’ny lehilahy. Ankoatra ireo andraikitra sahaniny isan’andro mantsy :
Nosintonina avy amin’ireo tantara tena nisy ny ankamaroan’ireo sarimiaina. Namboarina izy ireo, mba hampanonofy sy hahafinaritra ny mijery azy, ho an’ny ankizy. Inona no tena zava-nisy marina tao amin’ireo sarimiaina ireo.
Nahandro legioma miavaka, atao laoka sy fanokafam-bavony
Fomba fahandro legioma miavaka kely amin’ny mahazatra ireto atoronay ireto, hahafahanao misitraka ny vokatsoa entin’ireo legioma ao anatin’ny sakafo indray andro
Shopping “sacs et accessoires”
1. Sac bandoulière jaune moutarde 35x25sm :50.000Ar Facebook « Eddie Chic Wear » 2. Sac 2 en 1: 50.000Ar Facebook « Eddie Chic Wear » Cont: 032 45 866 34 – 033 04 670 38
Ireo fikoloan’endrika mila arahina, rehefa ho 50 taona
Miditra ao anatin’ny hoditra tena matoy ny sokajin-koditra, rehefa mananika ny faha-50 taona. Raha vao mifaramparana anefa ny taona faha-40, dia efa mila omanina sy ovaina tsikelikely ny fahazarana mikolo endrika, hahazoana tarehy tanora lalandava sy mahazo aina tsara. Ireto avy ny fahazarana mila arahina eo amin’ny fikoloana endrika, rehefa hiditra eo amin’ny faha-50 taona.
Ho voarara tanteraka ny fikapohana ankizy any Frantsa
Nisy indray ny fehezan-dalàna vaovao mikasika ny fandraràna ny fikasihan-tanana sy ny fanaovana herisetra na ara-batana na ara-tsaina amin’ny ankizy any an-tsekoly, izay dinihina ao amin’ny antenimieram-pirenena frantsay amin’izao fotoana.
Tovovavy 17 taona, main’ny herinaratra avy amin’ny findainy
Maty tsy tra-drano, ny alin’ny talata lasa teo tao Outreau – Frantsa, ny tovovavy iray, 17 taona. Main’ny herinaratra no nahafaty azy raha ny tena marina.
Andiam-behivavy mamoaka ny sarin’ny atin’akanjony any amin’ny “Twitter”
Ny 06 novambra lasa teo no niakatra fitsarana ny lehilahy iray 27 taona, fantatra fa nanolana tovovavy 17 taona tany Irlande. Rehefa nivoaka ny didim-pitsarana dia afaka madiodio ity lehilahy ity.
Fianakaviana frantsay roa, voarohirohy ho nanolana zaza 4
Olona miisa 8 no nalaina am-bavany tao Nevers, Frantsa ny zoma 9 novambra lasa teo. Voarohirohy ho nanolana sy nampihatra herisetra ara-pananahana tamin’ny zazalahy kely miisa efatra eo anelanelan’ny 4 sy 9 taona avokoa izy ireo.
Manana olon-tiana tena tiako be aho. Ahoana anefa no ahafantarako raha tena tia ahy koa izy ?
Raha ny tena izy dia mora fantatra kely ny olona tia. Tsy misalasala akory ianao amin’ny fitiavany fa tonga dia tsapanao izany.
« Le temps est le médecin de la douleur et des querelles »
Manasitrana ny zava-drehetra hono ny fotoana. Indraindray tokoa mantsy, amin’ny maha-olombelona dia mitroatra ny fo, mahateny teny tsy voahevitra ny vava ka mampikorontana mihitsy ny fifandraisana amin’ny hafa.